के–के रह्यो दिल्लीको चासो ? « Anumodan National Daily
के–के रह्यो दिल्लीको चासो ?
प्रकाशित मिति : ८ भाद्र २०७४, बिहीबार १३:५१
नयाँदिल्ली । पाँच दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट बिहिबार सम्पन्न भएको छ । यद्यपि यो समाचार तयार पार्दासम्म भ्रमणपछिको संयुक्त बक्तव्य आइसकेको छैन् । भोलिबाट देउवाको हैदरावाद तथा अन्य केही धार्मिक भ्रमणहरुको सुरुवात हुने छ र आइतबार उनको भ्रमण सम्पन्न हुँदै छ ।
दुई पक्षीय वार्ताहरु, भएका सम्झौता तथा अन्य कुराकानी हेर्दा दिल्लीको पछिल्लो चासो देखिएको विषयहरु यस प्रकार छन्:
सुरक्षा चासो मुखरित: यस अघिको भ्रमणमा पनि उठ्ने तर यसपटक अलि बढी उठेको बिषय हो– भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा चासो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि अन्य भेटघाटमा यो विषय उठ्यो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले गरेको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि मोदीले यो विषय उठाए । उनले खुला सिमा कारण यो साझा विषय भएको बताए ।
देउवाले पत्रकार सम्मेलनमा नै भारतको सुरक्षा चासोलाई पूर्णरुपमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । यसअघि भारतका विभिन्न कुटनीतिज्ञ तथा विश्लेषकहरुले पनि यस अगाडीको भन्दा भारतको सुरक्षा चासो यसपटक बढी गम्भीर भएको बताएका थिए र दुई पक्षीय भेटवार्तामा पनि त्यही देखियो ।
नेपालमा संविधान संशोधन: नेपालको संविधान संशोधनमा भारतको चासो अझै बाँकी छ भन्ने विषय भ्रमणपछि झन स्पष्ट भएको छ । भ्रमणको समयमा मोदी र देउवा दुवैले यो विषय उठाएकाले द्विपक्षीय वार्ताहरुमा यो विषय झन मुखरित भएको संकेत गर्दछ ।
ठूला जलविद्युत परियोजना: भारतको लगानीमा बन्न लागेका नेपालका केही ठूला विकासका परियोजनालाई गति दिनको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बढी नै सक्रियता देखियो । बिशेषत पन्चेश्वर र अरुण तेस्रोलाई अगाडी बढाउनृ प्रतिबद्धता दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले गरेको देखियो र भारतको झन बढी चासो देखियो ।
भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण: यस पटकको भ्रमणमा भूकम्पपछिको निर्माणसँग सम्बन्धीत चारवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण: भारतीय पक्षले राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बनाउने कुरामा जोड दिएको बताइएको छ । उच्च राजनीतिक तहमा अझ सम्बन्ध विस्तार गर्न आफूहरु तयार रहेको भारतीय पक्षले जानकारी गराएको छ ।